‘एमाले एकताका लागि ओली-नेपाल दुवैले गल्ती स्वीकार्नुपर्छ’ – Karnalisandesh
‘एमाले एकताका लागि ओली-नेपाल दुवैले गल्ती स्वीकार्नुपर्छ’
प्रकाशित मितिः २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:०८ August 13, 2021
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तत्काल एमाले विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नोतर्फबाट भएका गल्ति स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष गौतमले दुवै नेता आ-आफ्ना गल्ति नस्वीकारेसम्म पार्टी एकताको लागि थालिएको वार्ताले परिणाम नदिने ठोकुवा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा पनि पुन:स्पना भयो। संविधान लिकमा आयो। यसमा हामीले केही अनुशासनात्मक प्रवन्ध तोड्यौं। अब गल्ती महशुस गर्छौं भन्नुपर्छ। यसरी दुवैतिरबाट गल्ती, कमजोरी महशुस गरेमात्रै पार्टी एकता हुनसक्छ।’
दुवैले आफ्ना हठहरु नत्याग्ने हो भने तत्काल एमाले पार्टी एकता नहुने गौतमको भनाई छ। उनले मिडियामार्फत भनेका छन्, ‘अब कार्यगत एकतामात्रै हुन्छ। दुवै पक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षले गरेका गल्ती नस्वीकार्दासम्म पार्टी एकता सम्भव छैन। केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी, गद्दार र देशद्रोही भनेको कुरा फिर्ता लिएपछि वार्ताको वातावरण बन्छ। तर, केपी ओली त्यो फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्न।’
आफूले ओलीले माधव नेपालमाथि लगाएको आरोपबारे बैठकमै बोलेको भन्दै त्यसरी बोल्न पाइने भए विधानमै राखौं नत्र त्यस्तो अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न सुझाव दिएको बताए। ‘मैले त बैठकमै भनेको हो–के त्यसरी बोल्न पाइन्छ? यदि पाइन्छ भने विधानमै लेखौँ,पाइँदैन भने किन भन्ने? फिर्ता लिनुस् भनेको हो’, नेता गौतमको भनाइ छ।
रातोपाटीका अनुसार नेता गौतमले ओलीले गल्ती महशुस गरेपछि माधव नेपालले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नु गल्ती थियो भनेर भन्न नसक्नु नै समस्याको गाँठो रहेको पनि बताए। त्यसो भएमात्रै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने र पार्टी एकताको सम्भावना रहने आफ्नो विश्लेषण रहेको गौतमको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको पुष्टि भैसकेको गौतम बताउँछन्।
‘बारबार प्रतिनिधि सभा भंग गरेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम भनेर भन्दियो। दुईपटक नै सर्वोच्चले यस्तो भनेपछि यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो। सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि त व्यक्तिले गलत गरेको मान्नैपर्छ’, गौतमले दुवै नेताले आ–आफ्नो गल्ती नस्वीकार्दासम्म वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्ने बताए।
एमाले विवाद विभाजनन्मुख अवस्थामा पुगेपछि अध्यक्ष ओली पक्ष र नेता नेपाल पक्ष आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्न थालेका छन्। ओली पक्षले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर महाधिवेशन केन्द्रीत कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने माधव नेपाल पक्षले विद्रोह गर्दै देशभर समानान्तर संगठन विस्तार गर्ने बताइसकेको छ।
तर, ओली र नेपालबाहेकका दुवै पक्षका केही नेता भने पार्टी एकताका लागि भन्दै निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुको यो प्रयासले पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा ओली र नेपाल दुवै विश्वस्त छैनन्।
‘दुवै नेताका आ–आफ्ना अडान छन्। ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेर भन्दै नभन्ने, ओलीले त्यसो नभने माधव नेपाल शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नु गल्ती भयो भन्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी एकता सम्भव छैन’, ओली पक्षका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘अनि कसरी हुन्छ एकता?’